Iincwadi zikaIldefonso Falcones, upapasho olusasazayo ukusukela ngo-2006 | Uncwadi lwangoku
Ildefonso Iincwadi ze Falcones
Ildefonso Iincwadi ze Falcones.
Iincwadi zikaIldefonso Falcones de Sierra zizinto ezinqabileyo zoncwadi. Lo ngomnye wababhali abadumileyo beCatalan benkulungwane yama-XNUMX. Igqwetha ngomsebenzi, wazalelwa kwintsapho esisityebi, echaphazeleke kakhulu emva kokufa kukayise. Ke ngoko wanyanzelwa ukuba ajongane "nobunyani benyani" behlabathi ukuze aphumelele.
Inxalenye yokwaziwa ngumbhali weBarcelona kungenxa yeengxabano eziye zavela kubomi bakhe babucala. Uxelwe amatyeli amabini ukuphepha ukuhlawula irhafu. I-Audiencia de Barcelona imtyhola ngokudala iyelenqe elicokisekileyo ukuze angabhengezi ngeniso evela kwimisebenzi yakhe. Kwimeko yokuqala, wakwazi ukunqanda ukuvavanywa kwetyala, kodwa kwiminyaka emihlanu kamva, akazange abekho kwimeko efanayo.
1 UIldefonso Falcones kunye nohambo lweqhawe
1.1 Falcones, ophambili
1.2 Phakathi komthetho noncwadi
2 Icawe enkulu yolwandle
3 Uhlobo lweFalcones
4 Amaqhawe "Aflethi" kunye neengxabano zomthetho
5 Impumelelo kuphela
6 Ezinye iincwadi: ngaphaya kweCatalonia
7 Emve Ekhaya
8 Isakhiwo esifanayo (okanye ibali "lokwenyani")
UIldefonso Falcones kunye nohambo lweqhawe
Ubomi bukaIldefonso Falcones bubonakala buhambelana nembono ethi "Uhambo lweHlabathi". Sisakhiwo esibalisayo esacetyiswa ngumbhali waseMelika uJoseph Campbell kwincwadi yakhe Igorha elinewaka lobuso Ngo-1949. Ifomula echazwe yingcali yemibhalo bhanyabhanya uRobert McKee kwincwadi yakhe Iskripthi (1997).
Ukuthetha ngokubanzi, le yindlela eqhelekileyo ehamba ngabo bonke abalinganiswa abaphambili kwifilimu. Umthetho osemthethweni, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, oza kuthathwa "njengenguqulelo" ebanzi yesiseko sika-Aristotle Imibongo. Ikwayindlela eqhelekileyo yokubalisela kuncwadi, ifilimu, kunye nobugcisa bokwenza. Kwakhona, yindlela kaFalcones yokuthanda ukubalisa.
Uzalelwe e-Barcelona (1959), uhambo "lweqhawe" lwe Falcones luqala eneminyaka eyi-17. Oku, xa wafumana indawo yokuqala kwitumente yesizwe yamahashe amancinci eSalto. Nangona kunjalo, ukusweleka ngesiquphe kukayise kwamnyanzela ukuba ayeke imidlalo.
Phakathi komthetho noncwadi
Intlungu yosapho yamnyanzela ukuba afune umsebenzi ukuze ahlawule izifundo zakhe zaseyunivesithi. Nangona kunjalo, ngexeshana elifutshane wafumana umsebenzi kwiholo yebhingo. Idini lalifanelekile: waphumelela njengegqwetha kwaye wayenempumelelo enkulu njengegqwetha. Ekunye nomntakwabo kunye nomnye umlingane, waseka iofisi eBarcelona eyamnika uzinzo kwezemali.
Kodwa uloyiso lokwenyani olufunwa ziiFalcones lwaluseza. Esemncinane kakhulu wayefuna ukuba ngumbhali, kodwa ke ubomi babuthintele oko. Kungekudala ngaphambi kokungena kwewaka leminyaka elitsha, phantse iminyaka engama-20 esenza umthetho, wayekulungele ukulandela ubizo lwakhe lokwenyani.
Icawe enkulu yolwandle
Ngo-2006 - ngaphandle kobunzima bokukhutshwa kwayo - umboniso wokuqala kaIldefonso Falcones wabetha ezivenkileni zeencwadi. Ukumangaliswa kwabaninzi, (ngelo xesha) umbhali ongaziwayo waba kwindawo yokuqala kwintengiso eSpain. Kwiinyanga nje ezimbini, kwathunyelwa ngaphezu kwama-500.000, zombini ngeSpanish nangesiCatalan.
Icawe enkulu yolwandle.
Ungayithenga le ncwadi apha: Icawe enkulu yolwandle
Impumelelo yadlula kwimida. Ukusukela ngo-2007, yaqala ukuguqulelwa kwezinye iilwimi, ngoku ifikelela kwishumi elinesihlanu. Ngo-15 yatsiba kwihlabathi labamanyeli ngesandla sika-Antena 2018. Isikhululo sikamabonwakude saseSpain savelisa uthotho lwezahluko ezisibhozo ezatshayela umhlaba.
Ngaba kubi ukuba ngumbhali wefomyula? Le yingxoxo ngaphandle kwesivumelwano okanye isiphelo esinokubakho. Ingxoxo phakathi kwamacala amathathu ahlukaniswe kakuhle: abo bagxeki babhali ngefomula, iqela lixhasa oku kunye "phakathi". Ekugqibeleni, nawuphi na umbhali owaziwayo ubuzwa malunga nolu hlobo lwento.
Xa i-Falcones kuye kwafuneka iphendule, wayenza loo mntu okokuqala, wazichaza. Awunangxaki nokubizwa ngokuba "ngumbhali weshishini." Ngapha koko, ubeka elubala ukuba ukhetha ukuba "ngumthengisi ogqwesileyo" kunokubizwa ngokuba ngumbhali "obhalwayo". Isiteyitimenti esithile sicinga ngokujonga izihloko zaso ezihlanu eziphumelele kakhulu.
Amaqhawe "Aflethi" kunye neengxabano zomthetho
Ukonwabisa. Le yenye yezona ziqinisekiso zisetyenzisiweyo ukuchaza isicatshulwa sombhali waseCatalan. Ifundeka lula, ilula kwaye iyetyisa. Mhlawumbi ubukhulu becala babalinganiswa bakhe buphawulwe kakhulu. Ukwahlulwa okungashukumiyo phakathi kwabalinganiswa abalungileyo nabangalunganga ... kwaye embindini kuphela ngamagqwetha asalayo.
Uqeqesho lukaFalcones njengegqwetha lubonakala ngokucacileyo kumabali akhe. Ayisiyiyo kuphela into yokuba iwuphathe kakuhle umxholo kwaye iyayazi ngentloko imithetho, ibonisa ukuba yinto eyithandayo. Yiyo kanye le nto yeyona nto inyanisekileyo kwaye ihlukile emsebenzini wakhe. Kwaye kunye neenkcazo ze-cinematic kakhulu zeendawo zabo, bongeza umnxeba we-dynamism ekhethekileyo.
Kubabhali, ngumceli mngeni omkhulu ukusinda kwimpumelelo yenqaku labo lokuqala. Oku akuqhelekanga, ngendlela efanayo eyenzekayo neemvumi. Zininzi iimeko zababhali bencwadi enye, ngaphandle komgangatho wombhalo okhunjulwayo luluntu kunye / okanye ukugxekwa koncwadi.
Yimeko eyenzeka phantse ngokwendalo, nangona kungekho mntu waziyo ukuba kutheni. Akunjalo ngeFalcones. Nokuba ku Icawe enkulu yolwandle Ngowona msebenzi wakhe owaziwayo, umsebenzi wakhe wamva awuzange uliphoxe uluntu. Nokuba ngabavakalisi, abonwabileyo kakhulu ziinombolo zentengiso.
Caphula ngo-Ildefonso Falcones.
Ezinye iincwadi: ngaphaya kweCatalonia
Isandla sikaFatima (2009) yayiyincwadi yesibini etyikitywe ngu-Ildefonso Falcones. Kwakhona kudidi "lweentsomi zembali" (ngeli xesha ngaphandle kweCatalonia yakhe yemveli). IGranada, iAndalusia, yayiya kuba yeyona ndawo iphambili yengxoxo yakhe egcwele iimpikiswano ezingunaphakade phakathi kwamaSilamsi namaKristu. Ngokulinganayo, Ukumkanikazi ongenazihlangu (2013) libali elaqala kummandla waseAndalusi, eSeville.
Isixelela ngamava amakhoboka amnyama afika evela eCuba kunye nebhinqa elingenambeko nelinemvukelo phakathi komxholo wocalucalulo ngekhulu le-XNUMX leminyaka eSpain. Uthando olungenakwenzeka kunye neminqweno yesiphelo esikhohlakeleyo ayinakubakho. IMadrid isebenza njengendawo yokumisela icandelo lokugqibela lebali, apho abantu baqala ukuvukela umyalelo omiselweyo.
Iindlalifa zomhlaba (2016) yayingekokubuyela eCatalonia yeFalcones kuphela, luvavanyo olutsha lwe "universal" olwamenza waduma. Isicatshulwa kukuqhubekeka ngokuthe ngqo kwe Icawe enkulu yolwandle, yapapashwa kwiminyaka nje eli-10 emva kwencwadi eyandulelayo. Abalandeli bombhali kunye nenoveli yakhe yamazibulo bathabatheka yile nxalenye intsha ye Ephakathi iBarcelona.
Amalungelo abasebenzi kunye nokulwa noohlohlesakhe basebenza njengendawo yangemva yebali elitsha lothando: Umzobi wemiphefumlo (2019). Omnye umzobo waseBarcelona, ​​ngeli xesha ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX. Ngaphandle kwothando kunye nomzabalazo weklasi, yiCawa yamaKatolika ephela ivela njengomchasi omkhulu.
Isakhiwo esifanayo (okanye ibali "lokwenyani")
Ngamazwi ombhali, Umzobi wemiphefumlo Yindibaniselwano yezinto eziphikisanayo phakathi kwezinto ezinqwenelekayo noko kufunwa ngokwenene. Ngokupapashwa kwencwadi, iindaba malunga nomhlaza ophethwe ngu-Ildefonso Falcones zavela. Into entsha ngaphakathi kwesiqwenga somntu siqu eneempawu ezingacacanga, ngaphandle kwempumelelo yakhe kwezorhwebo.
Ukongeza, eyakho ityala lokubaleka ukuhlawula irhafu inokuphelela kwisigwebo seminyaka esithoba ejele. Ngaba eli bali liza kuguquka ngokungalindelekanga? Ngaba iqhawe liya kuba nakho ukoyisa yonke imiqobo kwaye lifikelele kwinkululeko yokugqibela? Lixesha kuphela eliza kuxela. Ukuqiniseka okuphela kobuso beso siphumo sinokubakho Iincwadi zikaIldefonso Falcones ziya kuhlala ngexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli » Ildefonso Iincwadi ze Falcones
IDomingo Villar. "Bendi soloko ndinomdla wolwandle"